Korea Climate Change Center(CCC) မှ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနသို့ မော်တော်ယာဉ်နှင့် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်။ – Agri Digit News
Posted on Author adminComments Off on Korea Climate Change Center(CCC) မှ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနသို့ မော်တော်ယာဉ်နှင့် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုများ ဖြန့်ဖြူးခြင်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင် အထည် ဖော်ရေးအတွက် Korea Climate Change Center(CCC) မှ စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနသို့ မော်တော်ယာဉ်များ နှင့် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းပေးအပ်ပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီက နေပြည်တော် ဇေယျာသီရိမြို့နယ် ရေဆင်းရှိ စိုက်ပျိုးပညာပေးရေး နှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်း(AERDTC) တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ အခမ်းအနား သို့ စိုက်ပျိုးရေးမေွးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ၊ အမြဲတန်းအတွင်းဝန်များ၊ ဦးစီးဌာနများ မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံး သံရုံးဒုတိယအကြီးအကဲ H.E Mr. Jung Yung Soo နှင့် Counsellor Mr. Han Sung Soo ၊ Korea Climate Change Center – CCC မှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် Ms. So Hee Kim ၊ ကိုရီးယား SK Telecom မှ Executive Vice President , Mr. Ryu Woong Hwan ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးများ၊ ဖိတ်ကြားထားသူများ စုံညီစွာ တက်ရောက် ကြသည်။ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားသည်။ဆက်လက်၍ ကိုရီးယားသံရုံး သံရုံးဒုတိယအကြီးအကဲ H.E Mr. Jung Yung Soo က ဂုဏ်ပြုဝမ်းမြောက်စကားပြောကြားပြောကြားပြီး ကိုရီးယား SK Telecom မှ Executive Vice President, Mr. Ryu Woong Hwan က နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားကြသည်။
ထို့နောက် Korea Climate Change Center – CCC မှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် Ms. So Hee Kim က မော်တော်ယာဉ်များနှင့် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းပေးအပ်ရခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
အခမ်းအနားတွင် CCC မှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် Ms. So Hee Kim နှင့် SK Telecom မှ Executive Vice President, Mr. Ryu Woong Hwan တို့က မြန်မာနိုင်ငံတွင် စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုများ ဖြန့်ဖြူးခြင်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်ရေးလုပ်ငန်း အတွက် မော်တော်ယာဉ်များနှင့် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများပေးအပ်ရာ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာရဲတင့်ထွန်း နှင့် ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူချုပ် ဦးအေးကိုကို တို့က လက်ခံရယူကြသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး က CCC အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် နှင့် SK Telecom Executive Vice President, တို့အား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများပေးအပ်သည်။
အခမ်းအနားအပြီးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများသည် စွမ်းအား မြှင့် မီးဖိုများ ဖြန့်ဖြူးခြင်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်ရေးအတွက် Korea Climate Change Center(CCC) မှ လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့် မော်တော်ယာဉ်များ နှင့် လက်တော့ကွန်ပျူတာများ ၊ ပရိုဂျက်တာများ၊ အပေါ့စားမီးစက်များ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း ဟမ်းဆက်များ အား လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုများ ဖြန့်ဖြူးခြင်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ထင်းသုံးစွဲမှု (၄၅)ရာခိုင်နှုန်း လှေျာ့ချနိုင်ခြင်း၊ သစ်တော ပြုန်းတီးမှု ကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲ မှုအပေါ် ကောင်းကျိုးများ သက်ရောက်စေခြင်း၊ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျော့နည်း စေခြင်း၊ Carbon Credit Sharing ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ (၁၅)ရာခိုင်နှုန်း ကိုရီးယားဘက်မှ (၈၅)ရာခိုင်နှုန်း ခွဲဝေမှု အရ နိုင်ငံအတွက် အကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်ခြင်း၊ ဒေသတွင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ ဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိနိုင်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများအပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ကျေးရွာသစ်လှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စွမ်းအားမြှင့် မီးဖို တစ်ဖို ဖြန့်ဖြူးတိုင်း အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာအား ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေအဖြစ် ကိုရီးယား Climate Change Center (CCC) မှ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ Account သို့ ထည့်ဝင်ပေးရန် သဘောတူထားပြီးဖြစ်၍ (၅)နှစ် အတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄.၃၂)သန်း ထူထောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ အဆိုပါစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည့် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့်လည်း ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု အပေါ် ထိန်းသိမ်းရေး အတွေ့အကြုံကောင်းများ ရရှိစေမည် ဖြစ်သည်။
တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ် ၆ ခုတွင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် အဆိုပါစီမံကိန်းကြောင့် ထင်းအသုံးပြုမှုလျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေခြင်းနှင့်အတူ တောင်သူ လယ်သမားများ နှင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများအား ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုပါ ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်သဖြင့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ မြှင့်တင် ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီး ပေးနိုင်ခြင်း၊ လောင်စာအသုံးပြု ချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက် ထင်းသုံးစွဲခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုကို လှေျာ့ချနိုင်သဖြင့် Carbon Credit ရရှိရန် တို့ကို ရည်ရွယ်ကာ စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုများ ဖြန့်ဖြူးခြင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ကို အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။